Location: musha » Kutumira » Airlines » Iyo New Northern Pacific Airways ichange iine chitarisiko cheAlaska
Dhizaini yeunyowani yakarongedzwa zvine mufungo kuratidza runako rwechisikigo rwerenje reAlaska.
PaJanuary 18, 2022, Northern Pacific Airways yakaunza dhizaini nyowani yekugadzira ndege yekutanga kune vashanyi vakapinda chiitiko chekuvhurwa muSan Bernardino, California, paCertified Aviation Services LLC (CAS.) hangar. Certified Aviation Services LLC ndiye MRO ane basa rekuita pendi yelivery.
Dhizaini yeunyowani yakarongedzwa zvine mufungo kuratidza runako rwechisikigo rwerenje reAlaska. Mavara matema anoshamisa uye toni dzakapfava dzegrey zvinomiririra nzvimbo ine makomo, aizi, uye sinou. Dhizaini yelivery inosanganisira iyo "N" tsamba yemavara inogara kuseri kweNorthern Pacific logotype. Iyo windshield ine yakashinga, yakasviba masking kurapwa iyo inowedzera yakasarudzika runako. Mapapiro endege anoputika ane kuputika kweturquoise inopinza, ichiperekedza vasina kwazvakarerekera kumiririra inofema yeNorthern Lights. Kupedzisa kutaridzika kwese, muswe unogamuchira inoyevedza uye inoyevedza mutsara motif inomonyoroka ine organic flair, yakabatana nemuswe unokwezva ziso wejet-black.
"Magadzirirwo evhavha anonyatso tora mhando yeNorthern Pacific uye rudo rwedu kumusha wedu weAlaska," anotsanangura kudaro Rob McKinney, CEO we. Northern Pacific Airways. "Magadzirirwo acho anoenderana nezvinodiwa nekambani yedu yendege - kukwidziridzwa kwevatengi, maonero anoyemurika, uye nzira itsva yekubatanidza vafambi kubva kumabvazuva kuenda kumadokero."
Ndege yakapendwa ndeye Boeing 757-200 [muswe nhamba N627NP]. Yekutanga in Northern Pacific Airways' zvikepe zvichaperekedzwa nemhando dzendege dzakafanana.